LIBRECON 2018: pfupiso yemusangano | Linux Vakapindwa muropa
LIBRECON inofambiswa neECBIT yakaunza pamwechete vanopfuura mazana mazana maviri vaipinda Mune ino yekupedzisira Chinyorwa che2018. Musangano unotungamira weyakavhurika matekiniki ekumaodzanyemba kweEurope wakaitika muSpain, yakarongedzwa neChishanu yeFree Technologies uye Open Zivakwa Makambani eBasque Nyika (ESLE) uye zvakare neayo mamiriro ehurumende ASOLIF. Inofungidzirwa kuti hunyanzvi hwehupfumi hwasvika hafu yemiriyoni euros yeguta reBilbao kwazvakaitika mumazuva ekupedzisira aNovember.
Pakave nezviitiko zvakawanda zve kufambisa pahunyanzvi hwekuvhura yezvikamu zvemaindasitiri, mari uye hutongi hweveruzhinji, pamusoro pekuunganidza misangano mazana mashanu evatungamiriri vanotungamira mubazi, paine vatauri makumi manomwe, kuratidzira makumi mana nekuvapo kwemakambani anotungamira mazana matanhatu mubazi rezve tekinoroji, sezvatakataura patakazivisa chiitiko uye kutengeswa kwematikiti eiyi shanduro.
Neichi chinyorwa chechisere chakavharwa, isu tinogona kungoti rave rimwe gore rimwe kubudirira zvizere. Yakanga iri nguva yechitatu kusarudzwa Bilbao semuzinda uye gore rino rave riine hunyanzvi hwakawanda hwepasirese kupfuura mumakore apfuura. Vemabhizimusi vanobva kuHispano-chiGerman Círuclo, Vhura Musangano Europe, CEBIT, OSADL, CNLL, ESOP, Aquinetic inogona kusimbiswa, pamwe nemakambani akadai seRed Hat, IBM, Hitachi, Mozilla, uye yakareba nezvimwe, kana vanhu vakaita saRichard. Stallman ...
El yekupedzisira muyero wave wakanaka kwazvo, sekukoshesa kwakaita varongi vaviri. Ndinovimba kuti kunze kwekukanganisa kwehupfumi kweBilbao nekuda kwemari inoshandiswa nevakauya vese mumazuva ayo yagara, zvinosiirawo zvinhu zvakanaka zvakawanda kune nyika yese maererano nehunyanzvi hwetekinoroji uye izvo manejimendi nevamwe varipo vanozvipira. zvishoma zvine kudiwa kwekutsigira urwu rudzi rweetekinoroji dzakavhurika kukuvadza kushandiswa kwesoftware yekambani uye matekinoroji akavharwa ayo anowanzo shandiswa.
Nenzira, uye ini handidi kuzopedza ndisina kutaura izvozvo futi iwo maLibrecon Awards akaunzwa senguva dzose, kuvhara chiitiko navo pazuva rekupedzisira nekupa mubayiro masangano akasiyana uye vanhu nemipiro yavo kune yakavhurika nyika. Iyo Mubairo wekambani Yakavhurwa ine mukurumbira wepasirese wepasirese waenda kuRed Hat, iyo Mubairo weakanakisa mutauri wepasi rose waCarsten Emde kubva kuOSADL, Mubairo wenyaya yakanakisa yedhijitari shanduko kubudirira kweGFI, Mubairo weakanakisa Librecon hurukuro yehunyanzvi kuNestor Salceda kubva kuSysgdig, uye iyo Mubairo wezano rakanakisa mukushandurwa kwedigital mune yeruzhinji manejimendi yeProvince Council yeBizkaia.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » LIBRECON 2018: pfupiso yemusangano
nezuro ini ndakatanga chirongwa chako chega chevanhu vanotaura chiSpanish Linux ... kana mumwe munhu achida kundipa ruoko, ndingafarire chaizvo!
Kuti uwane rumwe ruzivo ..
Iri bhuku iseti yemablog, mabhuku uye zvinyorwa zvandakawana paInternet
Pfungwa yangu uye chishuwo changu kugadzira remahara openource bhuku nezve iyo LPIC 1 chitupa cheshanduro 5, ichangoburitswa munaNovember 2018.
Kune akawanda akanaka mablogiki echitupa asi haana kumbobvira aprindwa fomati uye kubva mushanduro yechishanu handina kuwana chero chinhu.
Dambudziko nderekuti hapana muparidzi ari kuburitsa vhezheni yechishanu uye kunze kwaizvozvo anodhura kwazvo, angangoita ma5 euros pabhuku. Chii chiri nani pane chimwe chinhu nharaunda inozvivandudza uye ichikwanisa kuiprinta kweinosvika € 60.
Linux, mushure mezvose, zvakare yakatanga nenzira iyoyo, handiti?
Ndinovimba kubatana kwevose vanokwanisa kuwedzera, kunatsiridza uye / kana kugadzirisa.
Pindura kune vbits